Tilmaamaha Iibsiga Qasabadda-Hubka Ugu Fiican Qasabadaha Jikada 2020 | Tubooyinka Ugu Jikada Fiican | Qasabada jikada
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Tilmaamaha Iibsiga Qasabada
2020 / 09 / 16 QoondayntaTilmaamaha qasabada 3700 0
Mararka qaarkood, si loo soo qaado qasabad muuqaalkeedu wanaagsan yahay, dadku waxay ku wareegaan meherad agteeda ah, laakiin wali ma heli karaan mid ku habboon.
Markii hore, ma aanan aqoon sida loo doorto qasabad. Markii aan si nidaamsan u bartay aqoonta tuubada oo aan isbarbardhigay astaamaha qasabado badan, waxaan aakhirkii soo koobay qaar ka mid ah farsamooyinka xulashada qasabadda. Waxaan rajeynayaa in qof kastaa uu dooran karo qasabadda saxda ah iyada oo ku saleysan khibradeyda.
Haddii maqaalkani waxtar kuu leeyahay, fadlan ii soo sheeg aagga faallooyinka, oo rajeynaya is-weydaarsigaaga badan
Maxay tahay inaan dhib kala kulmo qasabadda?
Hagaag, waxaan dhihi karaa oo keliya inaan ka carooday qasabaddayda tan iyo yaraanteydii. Sidee bay u noqotay wax aan dhib badnayn. Si aan u dhaqo gacmahayga hal mar, waxaan u baahanahay inaan leexiyo shan ama lix wareeg. Hadaad dhahdo, ma rumeysan kartid, fadlan eeg sawirka hoose:
Waxaan u baahanahay inaan la kulanno cudur faafa sanadkan, waana inaan ka jawaabno baaqii dalka ee ahaa "inaan si joogto ah gacmaheena u dhaqano oo aan u caafimaad qabno adiga, aniga iyo isaga", marka waa inaan helno qasabad ku haboon Laakiin miisaaniyada way xadidan tahay. Runtii ma sahlana in laga dhaadhiciyo haddii aad soo iibsato qasabad ka fiican. Marka, sidoo kale maskaxdayda waan garaacay. Sideen ugu iibsan karaa qasabada ugu waxtarka badan kharash yar?
Aqoonta aasaasiga ah ee tubada sayniska caanka ah
Horaa loo yiri, haweeneyda dooneysa inay guursato ninka saxda ah waa inay sidoo kale ogaataa sida loo arko, sax?
Marka intaanan hadlin, waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo, imisa nooc oo qasabado ayaa jira?
Qeybta 3? Qeybta 4? Ma Qaybta 5aad?
Haha, jawaabtu waa: midna sax maaha.
Ha ku hadlin wax aan micno lahayn, qof walba ha ogaado noocyada aasaasiga ah ee qasabadaha.
Xaqiiqdii, kala soocidda qasabadaha waa wax aad u xiiso badan. Waxaa loo kala saari karaa qaababka soo socda:
Ma dareemeysaa inay tani guud tahay, maskaxdu xitaa ma laha muuqaal aasaasi ah, sax? Haha, waa caadi, aan ku bilownee:
Marka hore, aan ka hadalno maaddada. Maaddada qasabaddu saamayn kuma leh oo keliya nolosha adeegga tuubada, laakiin sidoo kale waxay xiriir dhow la leedahay caafimaadkeenna. Aynu jaleecno astaamaha qasabadaha qalabka kala duwan:
Ku kala saar qasabadaha walxaha
Ku kala saar qasabadaha qaab dhismeedka
U qaybi qasabadaha adoo furaya habka
U qaybi qasabadaha shaqadooda
Falanqaynta kore kadib, waxaan aaminsanahay inaad faham cad kahesho fikradaha aasaasiga ah ee qasabadaha, sax?
Aynu baranno qaar ka mid ah fikradaha muhiimka ah ee ku saabsan qasabadaha:
1. Qaybta ugu halista badan ee qasabadda: xudunta waalka.
Markaan faallo ka bixinno qasabad, waxaan inta badan dhahnaa dadweynaha waa xaq, soddohduna waxay leedahay hooyada waa xaq.
Laakiin dhamaanteen waan wada fahamsanahay, dhab ahaantii, ninka jiifka ah ayaa daawanaya xiisaha, iyo qofka gudaha jooga ee daawanaya albaabka.
Si loo go'aamiyo tayada tuubada, qodob muhiim ah ayaa ah in la eego xuddunta waalka. Sababta
Jihada tubbada iyo xakamaynta socodka biyaha dhammaantood waxaa lagu xaqiijiyaa iyadoo la xakameynayo jihada dabaqda iyo xakameynta cadaadiska.
Tirada jeer ee aan taabanno qasabada maalin kasta waxaa lagu qiyaasaa ugu yaraan tobaneeyo jeer. Si qasabadda looga dhigo mid waarta, waa inaan ku tiirsanaano.
Sawirka soo socdaa wuxuu ku tusayaa seddex meelood oo caadi ah: iskuxidhka dhoobada dhoobada, kubbadda birta ah ee birta ah iyo rullaluistemadka:
Marka sidee dhab ahaan u kala soocaysaa inuu spoolku wanaagsan yahay ama xun yahay?
Ku barto hab fudud:
1. Daar qasabadda gurigaaga, oo dareensii feejignaan marka mugga biyuhu ka kordhayaan yar iyo weyn, si aad u ogaato in dhaqdhaqaaqa oo dhami hagaagsan yahay, oo aan loo baahnayn in la hagaajiyo mugga biyaha in ka badan kala badh.
2. Fur kala-qabsiga tuubada kalabar, ka dibna kor iyo hoos u jeedi si aad u kordhiso xaddiga biyaha oo aad u xirto siday u kala horreeyaan si aad u ogaato in xoogga la isticmaalay uu isku mid yahay iyo in kale.
3. Markay barafku bidix iyo midig yahay (hagaajinta qaboojinta iyo kululaynta). (Marka hore isticmaal habka kor ku xusan) Kadib fiiri miisaanka, barkada wanaagsan way “caajisaysaa” markay tahay bidix iyo midig, gacantuna waxay dareemeysaa fudayd.
4. U isticmaal gacantaada inaad si tartiib ah karkariso garabka bidix ama midig si aad u aragto inay jiraan wax dabacsanaan ah, dabacsanaan, ama dareen culus. Way fiicantahay haddii aysan jirin.
2. Nidaamka korantada
Marka laga hadlayo korantada, qasabadaha ku yaal suuqyada aad inta badan ku aragto dukaamada qalabka wax lagu iibiyo ama suuqyada laga dukaameysto ayaa dhalaalaya, runti, tani waa saameynta elektiroonigga.
Maxay tahay tayada iyo xoogga soo saaraha qasabadda, markaa tayada koronto-dhalinta ayaa ka mid ah tilmaamayaasha lagu cabirayo.
Koronto-siinta wanaagsan waxay ka dhigi kartaa tuubada muuqaal wanaagsan, isla mar ahaantaana waxay sare u qaadi kartaa caabbinta abrasionka iyo caabbinta abrasion-ka ee qasabadda.
Alaabada qasabada fiican ayaa badanaa lagu dhajiyaa saddexda lakab ee nikkel nalka nus-nalka, nikkel niikal iyo chromium ee naxaasta la safeeyey lafteeda. Guud ahaan marka la hadlayo, dahaadhida naxaasku waa in la xoojiyo awoodda soo noqnoqota ee koronto-dhalinta, lakabka nikkel-ka ayaa loogu talagalay iska caabbinta daxalka, iyo lakabka chromium dahaarka dusha sare ee nikkelku waa in la kordhiyo adkaanta hal dhinac, iyo sidoo kale in la kordhiyo dhalaalka dhanka kale. Waxaan eegnaa qasabado dhalaalaya.
Waxa kale oo jira jaangooyooyin dhumucda koronto-dhaliyaha. Caato qafiif ahi uma adkaysato oksaydhka iyo daxalka. Si looga fogaado xaaladdan, heerka caalamiga ahi wuxuu dhigayaa dhumucda 8μm, oo aan ka badnayn 12μm.
Sidee loo kala saaraa in korantadu fiicantahay ama xun tahay？
Inta lagu jiro maalinta qorraxdu buuxdo:
* Si taxaddar leh u fiiri dusha qasabadda, haddii aysan jirin raad oksijiin ama alxamid, daloolo yar yar ama goobooyin, midabku waa isku mid;
* Sii wad inaad ku dareento gacmahaaga. Haddii aysan jirin soo bixid ama hadhuudh sida ciidda oo kale, tayada elektiroonigga ayaa ka wanaagsan xaaladdan.
Haddii aad rabto inaad sii tijaabiso, ka dib isku day inaad qasacadda ku riixdo farahaaga si xoog leh si aad u aragto in farahaaga si dhaqso ah u kala firdhi doonaan, ama waxaad ku neefsan kartaa neef dusheeda dusha qasabadda. Guud ahaan, tuubada ayaa sameyn doonta uumiga biyaha. Haddii uumiga biyuhu si dhakhso leh u baaba'o, markaa tayada gogosha ayaa wanaagsan, haddii ay ka gaabinayso laakiin aysan libdhin, markaa tayadu aad ayey u liidataa.
Shaqada elektaroonigga waxaa loogu talagalay bilicda iyo u adkaysiga daxalka. Micnaheedu maahan in qasabadu waligeed daxlayn doonin, gaar ahaan meelaha dadku inta badan taabtaan. Haddii aad rabto inaad sii wadato saameynta koronto-dhalinta, waxaad u isticmaali kartaa xoogaa wax waxyeellada gawaarida ah ah si aad si joogto ah u masaxdo.
Xumbadu waxay xakamayn kartaa biyaha inay si siman oo tartiib tartiib ah u soo baxaan, halkii ay markiiba ku degdegi lahaayeen, gaar ahaan xilligan ay furayaan qasabadda.
Ta labaad, gaar ahaan xumbada ka dib, dusha lagala xiriiro biyaha iyo shayga ayaa ka sii ballaaran, kaasoo badbaadin kara ilaha biyaha.
Maalmahan, biyuhu waxay leeyihiin afka wareega suuqa badanaa waxay leeyihiin buubbo, laakiin laba jibbaaran iyo nooca fidsan asal ahaan maahan. Haddii aad u baahato inaad xasuusato inaad iibsato afka wareegaya.
4. Astaanta qasabadda
Markaad iibsanayso qasabad, waa inaad fiiro gaar ah u lahaataa astaanta. Waxaa lagugula talinayaa inaad iibsato nooc weyn oo qasabad ah. Marka alaabada ay soo saareyaashaas waaweyn ay ka baxaan warshadda, qoysaska guud waxay leeyihiin liisanka wax soo saarka, goobta wax soo saarka, cinwaanka soo saaraha, iyo cabbiraadaha gaarka ah ee badeecada, si dhibaatooyinka ay u noqdaan kuwo waqtigooda ku habboon ka dib iibinta. Iyo qaar ka mid ah alaabada liita kaliya waxay leeyihiin calaamado warqado aan caddayn, ama xitaa sharaxaadda sheyga, sidaa darteed way adag tahay in la helo iyaga si ay ula macaamilaan dhibaatooyinka.
Sidee loo doortaa qasabad ku habboon?
1. Marka hore xaqiiji waxa aad u iibsanayso qasabadda, qasabada jikada waa in la iibsadaa; haddii ay tahay maydhashada, markaa waa inaad iibsataa qasabad qubeys oo xirfad leh; hadday tahay dhaqid iyo dhaqid, ka dib soo iibso tubbada weelka.
Marka laga hadlayo agabka: mudnaanta waxaa la siiyaa birta aan caadiga ahayn iyo dhoobada, waxa ku xiga naxaas iyo balaastik, iyo ugu dambayn alloys.
Fiiro gaar ah u yeelo dusha sare ee tuubada oo tijaabi marka hore iyadoo la raacayo habka lagu garto habka korantada. Midka buuxiya shuruudaha ayaa ka adag.
Waa lagama maarmaan in la doorto tuubbo leh xumbo, oo keydinaysa biyaha, oo leh lakab dheeri ah oo shaqo ah oo lagu sifeynayo nijaasta si kor loogu qaado tayada biyaha.
Marka laga eego dhinaca habboonaanta, way ku habboon tahay in la isticmaalo tubooyinka kor u qaadista iyo soo-kicinta
2. Eeg miisaaniyadaada oo ka dooro badeecada saxda ah miisaaniyada.
3. Laga soo bilaabo dhowr nooc oo badeecooyin isku nooc ah, isbarbar dhig tilmaamayaal kala duwan, haddii tilmaamayaashu dhow yihiin, dooro badeecada ugu kharashka badan.
Xaqiiqdii, furaha qasabadu wuxuu kujiraa maaddada, xumbada, xudunta waalka, habka korantada, soosaarida biyaha kulul iyo qabow, iyo shaqooyinka kale sida labalaab, kala bixid, fidin, iwm. keega, markaa waxaan kaliya xaqiijineynaa inaysan wax dhibaato ah ka qabin kuwan, markaa xulashada qasabadda waxay kuxirantahay dookhaaga nooca iyo adeegga iibka kadib.
Ugu horreyntii, ka fikir baahiyahaaga oo go'aamiya miisaaniyaddaada. Muddo intee leeg ayaad u baahan doontaa inaad iibsato qasabaddan? Haddii aad rabto inaad sii dheereysato, markaa waa inaad doorataa mid fiican haddii aad awoodid. Caabbinta waayeelka iyo carruurta guud ahaan uma fiicna sida loo adeegsado. Habka ugu fiican ayaa ah in la siiyo deegaan biyo leh oo tayo leh, taas oo si dabiici ah u yareysa fursadda jirro.
Waxa ugu muhiimsan waa in la isbarbar dhigo oo la doorto midka kugu habboon miisaaniyaddaada.
Hore:: Tilmaamaha Kushiinka Jikada iyo Qalabka Iibsiga Next: Sida Loogu Xidho Mashiinka Dhaqida Qasabada
2021 / 07 / 23 875
2021 / 07 / 21 1124
2021 / 07 / 21 1060
2021 / 07 / 20 1103
2021 / 07 / 19 842
2021 / 05 / 13 5565